Rustic Rhenock - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguChandra Kumar
Ifakwe phakathi kweenduli ezintle ze-East Sikkim 'RUSTIC RHENOCK' likhaya elimnandi. Le ndlu yangasese inembono yepanoramic engathintelwanga enengca enkulu apho ungaphumla khona, ube netheko kwaye wonwabele ubuhle obumangalisayo bendalo.
Le cottage isandula ukwakhiwa kwaye inobuhle bendabuko kuyo. Indlu ivula ingca enkulu enombono omangalisayo. Eli ziko libandakanya amagumbi amabini aneebhedi ezinkulu kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kumagumbi amabini anendawo yokupaka eyaneleyo. Iindwendwe ziya kufikelela kwindawo yegumbi lokuhlala, iholo yokutyela kunye nekhitshi. Indlu inomntwana kunye nesilwanyana sasekhaya. I-Bonfire kunye nokutya okuyinyani kwe-Nepali kuyafumaneka xa uceliwe. Sinika enye isethi efanayo yamagumbi. Zonke zinokubhukishwa ngokwahlukeneyo kwaye kunye. Ukubhukisha ungajonga olunye udweliso kwangelo gama.
I-Cottage ikumgama oziikhilomitha ezi-6 ukusuka e-Aritar Lampokhari Lake kunye ne-10 kms ukusuka eLake Mulkharka, eNtshona Bengal. Imalunga neekhilomitha ezingama-40 ukusuka kwindlela yeSilk edumileyo (Zuluk) kunye neekhilomitha ezingama-80 ukusuka eNathula, eIndiya-eChina Border. Iifoto zikwinkcazo.
Umbuki zindwendwe ngu- Chandra Kumar
Sifumaneka ukusuka ngo-9 kusasa ukuya ku-8 pm.